Shiinaha 2g Warshad Sheet iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Tusaale ahaan, habka gaarka ah ee loo yaqaan 'matcha tiramisu' waa: isku qas budada matcha oo leh rucub iyo biyo, oo dhinac iska dhig; Ukunta kala-soocid cad, saxanka waa inuu hubiyaa biyo la'aan iyo saliid la'aan, hana ku darin beedka beedka; Ku dar dheecaanka liinta iyo ku garaac ukunta ukunta korantada xawaare yar illaa ay goobooyin ka dhalayaan. Ku dar qiyaastii 1/3 sonkor iyo milix 1g oo sii wad inaad ku garaacdo xawaare yar. Markay goobooyinku bilaabaan inay baaba'aan, ku dar qiyaastii 1/3 sonkor ah. Hilib ilaa xumbada qoyan; Ku dar isku darka isku darka oo sii wad inaad ku garaacdo xawaare hoose illaa 9 si loo qaybiyo; Kala qaad burka keega ah iyo istaarijka, ku walaaq spatula, si deg deg ah iyo si tartiib ah, ha u sawirin wareegyada; Si wanaagsan u walaaq, ku shub caarada 8-inji oo laba jibbaaran, ku dabool hoosta caaryada lakab warqad saliid ah, si ay u fududahay in la kala qaado, ku dheji lakabyada dhexe iyo hoose ee foornada, ku kari 180 darajo illaa 25-28 daqiiqo, qaado oo qabow, ka dibna samee jiis farmaajo; Ku qoo biyo gelatin biyo qabow, ukunta ukunta ku dar sonkorta; karkari biyaha sonkorta illaa ay ka soo baxayaan. biyo sonkor ah ukunta ukunta. Isla markiiba ku wareeji baaquli kareemka kareerka ah biyo karkaraya oo si joogto ah u garaac ilaa ukunta ukunta ay adag tahay. Adkeynta ka dib, qaado oo sii wad dilka, illaa heerkulka hoose ee saxanka hoos u dhaco; Ku kuluji mascarpone biyo kor ilaa uu ka milan yahay, ka dib digsiga ka saar oo ku dar jeexyada gelatin ee la qooyay oo si fiican u walaaq. Ukudee kareemka ukunta la garaacay mascarpone-ka dhalaalay ee 3 qaybood ah. qaybinta; Ku shub kariimka khafiifka ah farmaajada 3 jeer oo si fiican u tuur. Kala jar jaakada macmacaanka ah ee la qaboojiyey laba qaybood oo waaweyn oo jarjar xaashiyo ama qaabab kale sida ku xusan weelka; Ku shub jiiska farmaajada qaarkood, ka dibna lakab keeg ah ; Ugu dambeyntii, ku shub jiiska jiiska, ku dhowaad buuxa, ka dibna qaboojiyaha wax ka badan 4 saacadood; Qabooji oo ka saar. Ku daadi budada matcha.
Hore: 2.5g Xaashida Gelatin
Xiga: 3.3g Xaashida Gelatin